ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတစ်ခုတွင်ထိရောက်သောဒေသခံ SEO ရှာဖွေနည်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 23, 2013 တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 23, 2013 Jayson DeMers
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ SEO သည်ပိုမိုတင်းကျပ်လာပြီးပိုမိုတင်းကြပ်လာသည်။ သို့သော်၎င်းသည် ပို၍ စျေးကြီးမည်ဟုဆိုလိုသလား။ SEO ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်သောကုမ္ပဏီအားလုံးသည်အင်တာနက်သို့မဟုတ် IT နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ အမှန်မှာအများစုသည်ပထဝီ ၀ န်းကျင်ကိုအကျိုးပြုသည့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားရှေးရှေးလိုအပ်ပါတယ် ဒေသခံ SEO ဆိုသည်မှာ ရိုးရာ, အမျိုးသား SEO ဆိုသည်ထက်။
ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ - သွားဆရာ ၀ န်များ၊ ရေပိုက်သမားများ၊ အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်များ - ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှ ၀ ယ်ယူသူများအားဆွဲဆောင်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေမှုများကိုအထူးအဆင့်သတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး က“ ဆီယက်တဲလ်ရှိသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ” သို့မဟုတ်“ မက်ဒီဆင်ရှိရေပိုက်သမားများ” ကိုရှာဖွေသည့်အခါသူတို့ထိပ်ဆုံးမှတက်ရန်လိုအပ်သည် ဒေသတွင်း SEO ဆိုသည်မှာလာသည်။
“ သွားဆရာဝန်ဆီယက်တဲလ် wa” သည်တည်နေရာအခြေပြုကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၇ ခုပါ ၀ င်သည်
အများကြီးရှိပါတယ် ဒေသဆိုင်ရာ SEO အကြောင်းရေးသားခဲ့သည် ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေရေးမောင်းနှင်သည့်စျေးကွက်တွင်၎င်း၏အရေးပါမှု။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒေသခံ SEO ဆိုသည်မှာကုန်ကျစရိတ် နည်း၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုလူအများကသဘောမပေါက်ပါ။ နှင့်ဒေသခံ SEO အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းငယ်သာအဓိက ROI ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Local SEO သည်ကုမ္ပဏီများမကြာခဏရောင်းချလေ့ရှိသော SEO package များထက်ပုံမှန်စျေးနည်းသင့်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ / အမျိုးသားအဆင့် SEO ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြင့်သင်သည်ထိပ်တန်းအဆင့်ကိုရရှိရန်အတွက်ကြီးမားသောဘတ်ဂျက်များမှလောင်ကျွမ်းနေသောအခြားထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသည်မှာထင်ရှားသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ SEO နှင့်ပတ်သက်သောအခါပြိုင်ဆိုင်မှုများသည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုချက်ချင်းလျှော့ချသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ပစ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများသည်“ တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သော” ဖြစ်လာခြင်းကြောင့်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် Google ၏ထောက်လှမ်းရေးကြောင့်) ။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့်အစား၊ သင့်အနေဖြင့်လက်တစ်ဆုပ်စာသောဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်။ အခွင့်အလမ်းကောင်းများမှာ၎င်းတို့အများစုသည်ကျွမ်းကျင်သော SEO ဆိုင်ရာအကူအညီများမရခြင်းကြောင့်သင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုလွှဲပြောင်းရန်တံခါးကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားခဲ့သည်။
ဒေသဆိုင်ရာ SEO နှင့်အတူအာရုံစိုက်သည် longtail သော့ချက်စာလုံးများ နှင့်ပထဝီ - တိကျတဲ့သော့ချက်စာလုံးများ။ ဒေသခံ SEO ဆိုသည်မှာ“ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာ” ဟူသောစကားလုံးများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားမည့်အစားယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုအဓိကထားသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေသော Seattle ရှိသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာများကိုသင်ပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။ longtail နှင့်ပထဝီဆိုင်ရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများကိုအဓိကထားခြင်းဖြင့်သော့ချက်စာလုံးယှဉ်ပြိုင်မှုသည်အတော်အတန်လျော့နည်းသွားပြီးယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့်ထိပ်တန်းအဆင့်ကိုရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏အစီရင်ခံစာတွင်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ယခုနှစ်တွင် Nielsen မှ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းသောစမတ်ဖုန်းစားသောက်ဆိုင်ရှာဖွေမှုများသည်တစ်နာရီအတွင်းပြောင်းလဲသွားသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်မှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်ဒေသတွင်းစာရင်းများကိုဒေသတွင်းရှာဖွေမှုများဖြစ်သည်။ ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒေသဆိုင်ရာရှာဖွေမှုရလဒ်များမှတစ်ဆင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများရရှိသည်။ ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းဂေဟစနစ်အတွက်သာမကဂူဂဲလ်ကိုဒေသခံစီးပွားရေးစာရင်းများရှာဖွေရန်အသုံးပြုသောအခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
သတိပြုရမည့်အရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုမှာစာမျက်နှာများဖြည်းဖြည်းဖွင့်လိုက်သောအခါစကားဝိုင်းများပြတ်တောက်သွားသည်။ မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတင်ရန်စောင့်ဆိုင်းရန်သည်းခံမှုနည်းသည်။ CDN (အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်) hosting သည်နှေးကွေးသောစာမျက်နှာများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
4. အသေးအဖွဲ Optimization
ရိုးရာ SEO နှင့်မတူသည်မှာ local SEO သည် citations ဟုခေါ်သောသင်၏ရည်ညွှန်းချက်မဟုတ်သောသင်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်လမ်းညွှန်တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပါဝင်သည်။ ရိုးရာ SEO နည်းစနစ်အချို့ကိုဘလော့ဂ်တစ်ခုကဲ့သို့ထားခြင်းနှင့်ထူထောင်ထားသောဒေသခံဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအရည်အသွေးကောင်းသည့်လင့်ခ်များစွာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမှန်ပင်အထောက်အကူပြုသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်အအေးခံခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် optimization အများစုသည် on-page နှင့် off-page များဖြစ်သောရိုးရာ SEO နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် local SEO နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဒါကပင်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ရိုးရာ SEO ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင်အထူးကျွမ်းကျင်သူသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုရှာတွေ့နိုင်သကဲ့သို့ ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည် Whitespark ၏ကိုးကားစရာရှာဖွေရေး, Yext ဒေသဆိုင်ရာ SEO လုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်အခြားလမ်းညွှန်စာအုပ်အမြောက်အမြား (၎င်းသည်လမ်းညွှန်စာအုပ်များစွာကို ဖြတ်၍ အညွှန်းများကိုအလိုအလျောက်စီမံခြင်းနှင့်စီမံခြင်း) ။
ဒေသခံ SEO ကုမ္ပဏီများသည်ဤလူကြိုက်များပြီးအောင်မြင်သောနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ရလဒ်များကိုရရှိရန်လိုအပ်သောအချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ရိုးရာ SEO အတွက်ထက်နည်းသည်။
SEO တွင်ရလာဒ်များကိုအာမခံချက်မရနိုင်ပါ၊ သို့သော် SEO SEO ၏အားထုတ်မှုများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောရလဒ်များရရှိရန်လေ့လာသူများကသဘောတူကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာ (နှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) ကသူတို့၏ SEO အားထုတ်မှုအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောရလဒ်များကိုရရှိခြင်း၏အားသာချက်ကိုနားလည်ကြသည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်အသုံးစရိတ်လျော့နည်းမှုကိုဆိုလိုသည်၊ အကြောင်းမှာအချိန်သည်ငွေဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျ SEO ကုမ္ပဏီအများစုသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များကိုပြသရန်ခိုင်လုံသောရလဒ်များမရရှိမချင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်သုံးစွဲသူများအားထိုရလဒ်များကိုရရှိရန်အတွက်ပြုလုပ်သင့်သည်ထက်များစွာပိုတောင်းသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းကိုဒေသခံ SEO ဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
7. ROI နှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်စဉ်များ
သမားရိုးကျ SEO နှင့်မတူသည်မှာဒေသခံ SEO သည်အလွန်မြင့်မားသော ROI ရှိသည်။ အကြောင်းမှာဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ကြပြီး၊ မြို့တစ်မြို့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေသူများသည်ဖောက်သည်များပိုမိုမြန်ဆန်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းပါးခြင်း (အများအားဖြင့်)၊ ဂူဂဲလ်နှင့်အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်စာရင်းတင်ခြင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးနှင့်အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်“ ယုံကြည်မှု” အချက်ကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
Local SEO သည် Post-optimization အခွင့်အလမ်းများနှင့်မကင်းပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်၊ အချို့သောဖြစ်စဉ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျ SEO အတွက်လိုအပ်သောပမာဏထက်နည်းပါးပြီးအရေအတွက်နည်းသည်။
Local SEO အတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်တတ်နိုင်သောအရင်းအမြစ်များ
၁။ Google Adwords Keyword Tool
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များကြွယ်ဝသောသော့ချက်စာလုံးကိရိယာများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်လက်တွေ့ကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ ဂူဂဲလ်၏ကိုယ်ပိုင် keyword Tool ကို အခြေခံအကျဆုံးသော့ချက်စာလုံးသုတေသနလိုအပ်ချက်များကိုအဖြေပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တည်နေရာအခြေပြုယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရှာဖွေမှုပမာဏဒေတာကိုရှာဖွေနေပါကဤကိရိယာသည်စွယ်စုံဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်သည်။
တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည့်“ ကိုးကားခြင်း” များကိုသင်ရနိုင်သည့်လမ်းညွှန်ရာပေါင်းများစွာရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်၊ ကိုးကားသတင်းရင်းမြစ်များ၏စာရင်း ယူအက်စ်နှင့်ယူကေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ အဲဒါအများစုဟာကောင်းနေတုန်းပဲ။
ဒေသခံ SEO သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဖြစ်သည့် Google Places၊ Bing Local နှင့် Yahoo! ဒေသခံ။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုရယူပါ ထို့နောက်သင့်စာရွက်ကိုကိုးကားရန်ရင်းမြစ်များကိုထည့်ပါ၊
ကိုးကား & ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင် 3
ဂူဂဲလ်၏အညွှန်းများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိရန်အတွက်အဓိကကျသည်။ သို့သော်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသည်လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ကြိုက်နှစ်သက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ Yelp ပြန်လည်သုံးသပ်စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးလူကြိုက်များကြသည်။ တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်ရလာဒ်များသည်များစွာသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများရှိသော Yelp ဒေသခံစီးပွားရေးစာရင်းများမှလာသည်။
“ သွားဆရာဝန်ဆီယက်တဲလ်” - ပထမရလဒ်ကိုကြည့်ပါ။ Yelp ကပါ။
Google ကအရမ်းကိုစမတ်တယ်။ ၎င်းသည်အညွှန်းများကိုဖတ်ရုံသာမကပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရေတွက်ပုံကိုလည်းပါသိနိုင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများများ၊ ထိပ်ဆုံးတွင်ပေါ်လာရန်သင့်အခွင့်အရေးများပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
သင်၏အတိတ်နှင့်ဖောက်သည်များ၊ မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပင်သင်၏စီးပွားရေးစာရင်းအားပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်အချိန်ယူပါကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုရယူရန်မခက်ခဲပါ (တတ်နိုင်သမျှဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်) ။ ဒါပေမယ့်သင်ကဒီဟာကိုအလွန်အကျွံမလုပ်ချင်ဘူး။
4. On- စာမျက်နှာ Optimization
လူတိုင်းနီးပါးဤသို့ပြောကြသည် - အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတိုင်းတွင်ထည့်ပါ (ဖြစ်နိုင်သည်အောက်ခြေရှိ). သင်စာရင်းပြုစုထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လမ်းညွှန်များအားလုံးတွင်သင်အသုံးပြုသောလိပ်စာကိုတသမတ်တည်းဖြစ်စေပါ။ ဖုန်းနံပါတ်များလည်းအရေးကြီးသည်။ Yext.com သည်လမ်းညွှန်အားလုံးတွင်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
5 ။ လူမှုမီဒီယာ
ကျန်းမာသောဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်သင်၏သင်၏ SEO SEO အားထုတ်မှုအတွက်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Social media သည် SEO အတွက်သာမကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ပါ ၀ င်ရန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ SEO SEO တွင်ပါဝင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးသည်ဒေသခံဖောက်သည်များအပေါ်တွင်သာအဓိကမှီခိုနေပါက local SEO သည်ပိုမိုမြင့်မားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာနှင့်ဂူဂဲလ်တွင်မြင်နိုင်သောသင်၏လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်တွင်အဆင့်မြင့်အဆင့်ရရှိရန်သင်၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတားအဆီးမဖြစ်သင့်ပါ။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်အသစ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။
Tags: ဒေသတွင်းရှာဖွေရေးဒေသတွင်း seoရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization
24:2013 pm မှာဇွန် 6, 41
Local seo ကိုပိုကောင်း။ တတ်နိုင်သောနည်းလမ်းအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
ဇွန် 24, 2013 မှာ 7: 26 pm တွင်
Fantastic post ကို, Jayson!
ဇွန် 25, 2013 မှာ 12: 17 pm တွင်
ဇွန် 27, 2013 မှာ 8: 47 pm တွင်
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အားလုံးသည်ဒေသခံစာရင်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်။ seo tools တွေအများကြီးသုံးသင့်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့် seo marketing ကို outsourcing လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာအွန်လိုင်းရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။
သြဂုတ် 27, 2013 မှာ 7: 42 AM
ဤသည် seo လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဖို့အများကြီးကူညီလိမ့်မယ်
7:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 58
SEO နှင့် Social Media ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့ ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။ ဂူဂဲလ်ဒေသတွင်းစာရင်းသည်ဒေသခံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 14, 2013 မှာ 5: 08 AM
မည်သည့်အလုပ်အကိုင်ပဲရှိပါစေဒေသခံ seo နှင့်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Pittsburgh SEO ဆိုသည်မှာ
2:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 47 တွင်
“ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွင်ဒေသဆိုင်ရာ SEO ကိုမည်သို့ထိရောက်စွာမည်သို့လုပ်ရမည်” ဟူသောဘလော့ဂ်။ ဤအကြံပြုချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကို SEO သုံး၍ ကြီးထွားစေရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ! 🙂